အသုဘမြင်တာ မင်္ဂလာ | မေတ္တာရိပ်
← ကျောက်ဆင်းတု ပြဿနာ
အရှင် ဇ၀န မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများ →
Posted on April 30, 2011	by mettayate
သက္ကရာဇ် (၂၀၀၀) ခုနစ်တွင် အရှင်ဇ၀န မြိတ်မြို့မှ ရွာတစ်ရွာတွင် နှစ်ညဟောရန် စီစဉ်ထား၏။ ထူးခြားမှုတစ်ခုကား ရွာ၏သချိုင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းနောက်မှာ ရှိနေ၏။ ထို့ကြောင့် အသုဘချလျှင် ကျောင်းဝိုင်းထဲမှ ဖြတ်သွားကြရ၏။ ထိုအဖြစ်ကို ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးက သဘောမကျ။ တစ်နေ့ခင်းတွင် ကျွန်ုပ်ရှေ့၌ အသံထွက်ပြီး ညည်း၏။
“ဦးဇ၀နရေ၊ ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းထိုင်ရတာ ကျန်တာ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ အသုဘကြီး ကျောင်းဝိုင်းထဲက ဖြတ် ဖြတ်ချတာကတော့ မင်္ဂလာကို မရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကျောင်းဟာ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။”
“မင်္ဂလာ” ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကုသိုလ် ဖြစ်တာကို ပြောတာပါ ဘုရား။ အမင်္ဂလာ – ဆိုတာကတော့ အကုသိုလ် လို့ ယူရမှာပေါ့ ဘုရား။ ဒီနေရာမှာ ဆရာတော် ကျောင်းထိုင်ရတာ သိပ်ကံကောင်းတယ် ဘုရား။ သင်္ချိုင်းမြေကို မြင်ရတိုင်း၊ အသုဘချတာကို မြင်ရတိုင်း “သြော် ငါလည်း သေရတော့မှာပါလား” ဆိုတဲ့ သေခြင်းတရားကို အမှတ်ရတဲ့ မရဏနုဿတိဘာဝနာ ကို ပွားများပြီးသား ဖြစ်နေတာကို ဘုရား။”
“ဘာဝနာကုသိုလ် ဆိုတာ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်ထက် အများကြီးသာပါတယ် ဘုရား။ ဒါကြောင့် မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် လို့ ဆိုတာပေါ့ ဘုရား။”
မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံက ဘယ်လိုလဲ ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ ပြောသာပြောနေကြတာ သေချာမသိပါဘူး ဘေးမှ ဒကာတစ်ဦးက ၀င်မေး၏။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မသာတစ်ခေါက်လိုက်ပို့ရင်း “ငါလည်း တစ်နေ့သေရမှာပါလား ဆိုတဲ့ မရဏနုဿတိဘာဝနာကို ပွားများလိုက်ရင်ကျောင်းကို ဆယ်ခေါက်သွားပြီး လှူဒါန်းတဲ့ ဒါနကုသိုလ်၊ ဆောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ထက် အများကြီး သာတယ်လို့” ပြောတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာတော်မှာလည်း အသုဘမြင်တိုင်း မင်္ဂလာ ဖြစ်နေတာပေါ့ ဘုရား။
အင်း . ဦးဇ၀န ပြောမှပဲ စိတ်ဆင်းရဲစရာကနေ စိတ်ချမ်းသာစရာ ဖြစ်လာပြီ။
ဆရာတော်က ထိုသို့အမိန့်ရှိလာသဖြင့် ကျွန်ုပ်မှာ အလွန်ဝမ်းသာရ၏။ ကျွန်ုပ်ကို ဆက်လက်ပြောစေလိုသည့် အမှုအရာကို တွေ့ရသဖြင့် ဆက်လက်လျှောက်ထားရ၏။
အသုဘတွေ့ရင် မင်္ဂလာ မရှိဘူး။ လာဘ်တိတ်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဟာ လောကီဂိုဏ်းဆရာတွေရဲ့အမြင်၊ ဟိန္ဒူဝါဒရဲ့ အမြင်တွေပါ ဘုရား။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ အမြင်အရတော့ “သံဃာ့ပစ္စည်းကို ရှောင်၊ အသုဘပစ္စည်းကို ဆောင်” လို့တောင် စကားပုံ ရှိပါတယ်။ ကူးတို့ခစတဲ့ အကြွေစေ့ကို ဆောင်ရင် ဈေးရောင်း ကောင်းတယ်လို့တောင် အယူရှိကြပါတယ်
အိမ်မက်တိတ္ထုံကျမ်းတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ လူသေကို မြင်မက်သော် လာဘ်ရအံ့ – လို့ ပါ ပါတယ်ဘုရား။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်မအလောင်းကို ပတ်ထားတဲ့ပိတ်စကို သင်္ကန်းချုပ်ဝတ်ရအောင် ပံသုကူ ကောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကတော့ အယူအဆတွေလွဲမှားနေကြတုန်ဲး ဘုရား။ လူသေမပြောနဲ့။ အသုဘယာဉ်တောင် စက်ချို့ယွင်းလို့ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာ လာရပ်ရင် ပက်ပက်စက်စက် ရန်တွေ့တတ်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသုဘယာဉ်တွေဆိုရင် ဘာသာခြားတွေ ပိုင်တာများတယ်။
“မြန်မာလူမျိုးတွေ သေတိုင်း ဘာသာခြားတွေမှာ ရံပုံငွေတိုးတာပေါ့။ အဲ့ဒီ ရံပုံငွေတွေကိုလည်း ဘာသာခြားတချို့က မြန်မာမတွေကို ပြန်ယူတဲ့အခါ အသုံးချကြပြန်တယ်။”
“ဟဲ့ အဲ့ဒါကို မြန်မာတွေ မသိကြဘူးလား။”
“မသိတဲ့သူက များပါတယ်။ သိတဲ့သူကျတော့လည်း အသုဘဆိုရင် မင်္ဂလာမရှိ- ဆိုတဲ့ အယူအစွဲကြီးက ရှိနေတော့ လက်ပိုက်ပြီးတော့ပဲ ကြည့်နေကြရတယ်။ အခုတော့ ၀မ်းသာအားတက်စရာ သတင်းကို ကြားနေရပြီ ဘုရား။ မန္တလေးမြို့ တောင်စလင်းတိုက်သစ်ဆရာတော် ဦးတိက္ခအရှင်မြတ်က အသုဘယာဉ်တွေ ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ပြီး ကျောင်းထဲမှာ ထားပါတယ်။ ဘယ်သူသေသေ အကြောင်းကြားလိုက်ရင် အခမဲ့ (ကုသိုလ်ဖြစ်) လိုက်ပို့ပါတယ်။ သဒ္ဓါရှိလို့ တတ်နိုင်ရင်လည်း အလှူငွေထည့်ချင်သလောက် ထည့်လို့ရပါတယ်။ ကားပျက်ရင် ပြင်ရအောင်၊ နောက်ထပ် ကားစီးရေ ထပ်တိုးလို့ ရအောင်ပါ။ အခုတော့ ဆရာတော်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုကြောင့် ဒကာ၊ ဒကာမတွေပါ အားတက်သရော ပါဝင်လာကြပါပြီးဘုရား။”
“အခုဆိုရင် ရန်ကုန်က ဒါရိုက်တာ ဦးသုခဦးဆောင်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေပါ အသုဘယာဉ်ဒါနကို ပြုနေကြပါပြီ။ သာဓုခေါ်စရာပါ ဘုရား။”
စိတ်ဝင်စစား နားထောင်နေသော အနီးမှ ဒကာက-
အဲဒီလို အလောင်းတွေ သဂြိုဟ်ပေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးတွေ ရနိုင်သလဲ ဘုရား။
ရတဲ့အကျိုးတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အထူးခြားဆုံး အကျိုးကတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ သံဝေဂဥာဏ်တွေ ၀င်လာပြီး ရဟန္တာဖြစ်ရတယ် ဆိုတဲ့အကျိုးကို ရပါတယ်။
ယသသူဌေးသားဟာ အတိတ်ဘ၀တစ်ခုတုန်းက သူတစ်ပါးအလောင်းတွေကို မီးသဂြိုဟ်ပေးတဲ့ နာရေးကုသိုလ်တွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းတွေကို မီးရှို့ရင်းနဲ့ မတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ မရဏနုဿတိဘာဝနာတွေကို အလိုလိုပွားများပြီးသား ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် အခုလို စည်းစိမ်ချမ်းသာအပြည့်နဲ့ သူဌေးသားဘ၀မှာ နေရပေမယ်လို့ သံဝေဂဥာဏ်တွေဝင်လာပြီး ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြုလိုက်တယ်။
နာရေးကုသိုလ် ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ပွားများခဲ့တဲ့ ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကြောင့် လွယ်ကူတဲ့အကျင့်၊ လျှင်မြန်တဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့ ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ အလောင်းတွေကို သင်္ဂြိုလ်ပေးလို့ ရရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေပဲပေါ့။
(မှတ်ချက်။ တချို့သော စာပိုဒ်များကို ချန်ခဲ့ပါသည်။)
1 Response to အသုဘမြင်တာ မင်္ဂလာ
I would like to know this post,got this dama knowledge from you unexpectedly
Thanks so much for your post and explanations.
Thar Du…Thar Du…..Thar Du
သမ္ဗုဒ္ဓေ ပါဠိ ဘာသာပြန်
ထေရ၀ါဒသည် ဟီနယာန မဟုတ်
ဇောစေတနာ (၇) ချက် အကျိုးပေးပုံ